SunTrust Blog - Blog Blog Ama
- Nri a ga-eri iji belata shuga ọbara - Ndị nwere ọrịa shuga anaghị emepụta insulin zuru oke ma ọ bụ enweghị ike iji ya nke ọma, na-eduga glucose na-amụba n'ọbara. Otu ụzọ isi nyere aka ịchịkwa ọnọdụ ahụ bụ iri nri na ...
By Na -agba egwu January 27, 2022 blog, Family, Travel 0 Comments
- Obodo ndị a ga-aga na Eprel - Eprel fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara afọ zuru oke, ọ bụkwa oge ịhụnanya tupu oge ekeresimesi tupu oge eruo. Na post a, m ga-egosi gị ụfọdụ ọmarịcha ọmarịcha obodo na-atọ ụtọ ...
Foto maka ndị mbido – Ọ bụ ezie na foto abụghị naanị ụzọ isi jide ụwa, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ihe kacha arụ ọrụ. Elepụla anya karịa ndepụta mgbasa ozi ọhaneze ọkacha mmasị gị, ụlọ ọrụ akụkọ, akụkọ magazin, ma ọ bụ mkpuchi akwụkwọ iji ghọta otú ike siri dị...
By Ndị ọrụ TMLTS January 27, 2022 Finance, ngwaahịa 0 Comments
- Ihe ị ga-amata gbasara ọrụ ego BMW - Ọ dịtụla mmasị ịmata ihe ị ga-ama gbasara Ọrụ Ego BMW? Ọrụ ego BMW nọ ebe a iji nyere gị aka ịbanye na igwe ịnya ụgbọ ala kacha nke nrọ gị. Ọrụ ya ga-enyekwara aka...
By Victoria Akpan TMLT January 27, 2022 Ịzụ ahịa, Technology 0 Comments
- SUV kacha mma maka ịdọrọ 2022- SUV bụ ụgbọ ala nke dabara na ya niile, nke nwere ike ịkọwa ihe kpatara o ji ewu ewu. Site n'ọnụ ụlọ ndị njem ha sara mbara ruo n'ikike ibu ha nwere ike imegharị ya na, maka ọtụtụ ndị, ikike ịdọrọ ha dị mma. Na ike na niile...